ကျွန်တော်ရဲ့ blogger လာရောက်လေ့လာသူတိုင်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Be care Stick worms
Add the stick at the body of broken bodies strong and defined in the week that the United States, the epidemic level of 85% of Americans belly of being infected with the body of the stick worm
I predicted6months Serious restaurant with selected food and pets, then you want to be advised to wash the cell phone to kill the parasites enter the body, and the observance of many doctors do not carefully study the most important steps in relation to the animal parasites strong eyes and see everybody knows the hard daily life can be infected with the parasites enter the body of living because of Broken Sword and faced with ever parasites may not think you felt so sick to normal because of broken lives parasites strong because the Damage Is not as strong because the type of bodies , the more the amount is very small number of Countries, any Where in the body the blood are able to Journey through the parasitic Victims of human Nutrition to Eat, so this irritation, could lose its Combat parasitic worms Some argue their opinions autiommune disorder tend to get heading in the deterioration of the immune system
: This worm found are often very rare to see if the heart is often found တဈကောငျတညျး
Tape worms; The worm infected fish from eating pork meat to feed the hair carefully, especially if possible to enter the lower intestine, so it usually is not infected meat handling gloves and washing hands should be washed in soap and change
Pin worms; S called intestinal and lung often pigeon eggs into the night would often come down egg process the smaller animals are put back in the body spa when you can hand code put nails on the other hand, but powerful, which often remain flat cells devoted to the wind and blown about Basque A small amount can enter the lungs when breathing
Hook worms and Thred worm; The best type of clean drinking water is often transmitted from the hair or feet of infected by the size ofavery small, bare legs from the skin so it can be accessed easily and without the need to clean shoes for many years, this type of card bodies can live up to twelve eggs eggs night
symploms of parasite infuction; If you have been infected with parasites thickness = diarrhea or stomach
Intestinal and stomach cramps to forbear
Tap the number of
Oral pale hot
Anal itching, especially in the nighttime
Difficult to sleep,ahealthy body is difficult to control (consumed)
Itchy feet when coughing blood around fast heartbeat, anemia, eye Judith Ann
Often get whooping cough
Posted by RammarKyaw at 20:12 No comments: Links to this post
မွန်မြတ်လှသော ဦးသန့်၏ စေတာနာ...
၁၉၆၇ ခုနှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ နှစ်သစ်သဝဏ်လွှာပါးလိုက်ရာတွင် ဦးသန့်က ကမ္ဘာ့လူသားများအား စစ်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တွေး၍ပူကြပါဟု သတိပေးခဲ့သည်။
၆၇ ခုနှစ်၌ ကမ္ဘာကြီး ငြိမ်းချမ်းညီညွတ်အောင် ကြိုးပမ်းကြပါ၊ စစ်နှင့်ငြိမ်းရေးအတွက် တွေးတောပူပန်ကြပါ ဟုဦးသန့် နှိုးဆော်သည်......။
စစ်ကြီးဖြစ်ပွားနေသောကြောင့် ဒုက္ခအကြီးခံစားနေသည့် လူဦးရေမှာ ကမ္ဘာ၌ ပို၍ပို၍ များပြားလာသည်။လူသားတို့သည်ဤစစ်ကြီးကြောင့် ပေါ်ပေါက်လာမည့်အဖြစ်ဆိုးများ ကိုသိနားလည်ရမည်။ အထူးသဖြင့်ထာဝရ လိုအပ်သော ငြိမ်းချမ်းရေး ၊တရားမျှတရေး နှင့်လွတ်လပ်ရေးတို့အတွက်လည်းကောင်း၊ဦးတည်အသုံးချသည့် သယံဇာတပစ္စည်းနှင့် ခွန်အားတို့ကို အကြီးအကျယ်ဖြုန်းတီးနေကြောင်း သိနားလည်ရမည်။
ထို့အပြင် ဦးသန့်က နိုင်ငံ အချင်းချင်း အပြန်အလှန် အမှီသဟဲပြုနေရပုံကိုလည်း ပြောလိုက်သည်။ မည်မျှပင်တန်းခိုးအာနာကြီးမား၍ ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံဖြစ်စေကာမူ သူ့ဘာသာပြည့်စုံဖူလှံမှုမရှိနိုင် ။၊
Posted by RammarKyaw at 21:51 No comments: Links to this post
အနှိုင်းမဲ့ ဓါးနဲ့ တူသောဒေါသ
နဂိုက စိတ်နေဘယ်လောက် နူးညံ့နူးညံ့ ဒေါသဝင်လာရင် စိတ်နေကြမ်းတမ်း သွားပါတယ်။ နဂိုကစိတ်ဓါတ် ဘယ်လောက်မြင့်မြတ်မြင့်မြတ် ဒေါသဝင်လာရင် စိတ်ဓါတ်ယုတ် ညံ့သွားတတ်ပါတယ်။... .လောကမှာရှိရှိသမျှ အပြစ်အားလုံး ထဲ့မှာ ဒေါသအပြစ်ဟာ အနှိုင်းမဲ့ အပြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်စိတ်။ ကိုယ့်ဘဝကို ပျက်စီး ၊ဖျက်စီးတဲ့အရာဟာ ဒေါသပါပဲ.. .ဒေါသဟာ ဓါးတစ်လက်နဲ့ ဥပမာတူပါတယ်။ ဓါးဟာ အရာရာကို ဖြတ်တောက်ဖို့ ပေါင်းစည်းဖို့ မဟုတ်သလို ဒေါသဟာလည်း အရာရာကို ဖြတ်တောက်ပစ်တတ်ပါတယ်။
Posted by RammarKyaw at 05:40 No comments: Links to this post
ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေ ဗိသုကာ ဦးသန့်၏ ငယ်ဘဝ အစ
မျက်မှောက်ခေတ် ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးကို စွမ်းစွမ်းတမံဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအားညွန်ပြပါဆိုလျှင် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေ အတွင်းရေးမှုချုပ်၊ ဝဏ္ဏကျော်ထင် ၊ သီရိပျံချီ ၊စည်သူ ၊မဟာသရေစည်သူဘွဲ့ နှင်ါ ဒေါက်တာဘွဲ့ရ ဦးသန့် ကိုသာပထမဦးစွာ ညွန်ပြရမည်ဖြစ်ပေသည်။ ဦးသန့်သည် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ ၊ မအူပင်ခရိုင် ၊ပန်းတနော်မြို့သား ဖြစ်သည်။ ဦးသန့်၏ မိဘများမှာ စက်ပိုင်ရှင်-မြေပိုင်ရှင် ဦးဘိုးနှစ် နှင့် ဒေါ်နန်းသောင် တို့ဖြစ်ကြသည်။
ဦးသန့်၏ဖခင်ဦးဘိုးနှစ်မှာအိန္ဒိယ နိုင်ငံ ကလကတ္တားမြို့ သို့သွားရောက်ပညာ သင်ယူခဲ့သူဖြစ်သည်။ ၁၉၁၁ ခုနှစ်တွင် သူရိယသတင်းစာတိုက် လီမိတက်ကို တည်ထောင်၍ သူရိယသတင်းစာမြန်မာနိုင်ငံတွင် စတင်ထုတ်ဝယ်သည်။ ထိုစဉ်က သူရိယသတင်းစာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ ၌ နာမည်ကျော် နေသော မင်းလောင်းမောင်သန့် သတင်း ခေတ်စားလျှက်ရှိ၏။ ဦးဘိုးနှစ် နှင့် ဒေါ်နန်းသောင်တို့ သည်ချစ်မငြီးသော သားဦးကလေးကို သောကြာ သားလည်းဖြစ်သည့်အတွက် မောင်သန့် ဟုပင်အမည်ခေါ်တွင်လိုက်သည်။
မောင်သန့် သည်စာကို အပတ်တကုတ် ကြိုးစားခဲ့သည်။ သူငယ်တန်းမှစ၍ စာကိုအချိန်မှန်မှန် ကျက်မှတ်တတ်သော အလေ့အကျင့်ရှိခဲ့၏။
ပန်းတနော်မြို့တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာကလျာဏ ယုဝ အသင်းကြီး၏ ဝိုင်အမ်ဘီအေ (Y.M.B.A )အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ အလယ်တန်းကျောင်းတွင် တက်ခဲ့၏။
မောင်သန့်သည် ငယ်စဉ်ကပင် စာပေဗဟုသုတ လေ့လာလိုက်စားခြင်း၌ ဝါသနာထုံသည်။
ရှေးမြန်မာစာဆိုတော်များရေခဲ့သော ပျို့ကဗျာ ၊မော်ကွန်း စသောစာပေများကိုကျောင်းစာအချိန်မှ ပြင်ပ အချိန်များတွင်များတွင် လေ့လာမှတ်သားတတ်သည်။ မောင်သန့်သည် အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ်ကပင် အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာကြီး ရှိတ်စပီးယား နှင့် နာမည်ကျော် စုံထောက်စာရေးဆရာ ကိုနင်ဒွိုင်း တို့၏ ဝတ္တုများကို သဲကြီးမဲကြီး ဖတ်ရှု့ခဲ့သည်။
Posted by RammarKyaw at 01:56 No comments: Links to this post
ဒို့ဆီမှာလည်း ဗုန်းတွေအများ ကြီး (ဟာသတိုလေးများ )
ကမ္ဘာ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် ဖြစ်သည်။ အလွန်ကြီးမား ခမ်းနားသော နေပြည်တော်ကွင်ကျင်းပပြီး စားပွဲဝမ်းကြီးအလည်တွင် တွင်းနက်ကြီးတစ်ခုထားရှိသည်။ မလေးရှားမှကိုယ်စားလှယ်က စားအုန်းဆီ ပေပါ ၁၀ ကိုဝေါခနဲ့ နေအောင်သွန်ချလိုက်ပြီး ၊တစ်ခွန်းတည်းပြောသည်။ "ကျုပ်တို့ဆီမှာ ဆီးအုံးတွေက အများကြီးပဲ ၊နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ခုတ်မကုန်ဘူး " မြန်မာကို ငဲ့ ကြည့်သွားတယ်။ စင်္ကာပူ ကိုယ်သားလှယ်က ရေသန့် ဂါလန် ၁၆၀၀ ကိုတွင်းနက်ကြီးလဲ့ သွန်ချလိုက်တယ်။ " ကျုပ်တို့ဆီမှာရေသန့်တွေအများကြီး နေရာတိုင်းမှာရေချိုးမကုန်ဘူး " မြန်မာကို စောင်းကြည့်သွားတယ် ။ အရှေ့အလယ်ပိုင်း ကိုယ်စလှယ်က အဖိုးတန်ရေနံဂါလံ တစ်ထောင် သွန်ချလိုက်ပြီး ပြောသွားပြန်တယ်။ " ဒီသယံဇာတ တွေက ကျုပ်တို့ဆီမှာ အများကြီး နေရာတိုင်းမှာတူးမကုန်ဘူး " မြန်မာ အစိုးရမခံချိ မခံသာဖြစ်လာသည်။ ဒေါသထွက်လာကာ ဗုံတစ်လုံးပစ်ခွဲပြီး တစ်ခွန်းတည်းပြောလိုက်သည်။ " ကျုပ်တို့ ဆီမှာဗုံတွေအများကြီး နေရာတိုင်းမှာ ဖေါက်မကုန်ဘူး ..." < ဖုတ်လှိုက်ဖုတ်လှိုင် > ဒီမိုကရေစီ ရပြီးနောက် သမ္မတကြီးကိုယ်တိုင် ပြည်သူလူ ထုရှေ့တွင် မိန့်ခွန်းပြောနေလေသည်။ " ပြည်သူအပေါင်းတို့ အခုဆိုရင်စစ်အာဏာရှင် စနစ်ကိုလည်း နောက်မှာကန်ထားခဲ့ပြီ... စည်းကမ်းပြည့်ဝသော ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်ကြီးကိုလည်း ခြေလှမ်းနေပြီ ... ကမ္ဘာနဲ့ ယာဉ်တဲ့ စီးပွားရေးအခွင့်လန်းတွေ ဟာလည်း လက်တစ်ကမ်းမှာ ... တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ရပိုင်ခွင်တွေကိုလည်း ဆုတ်ကိုင်ရတော့မယ် ..." ကဲဘာများမရှင်းတာရှိသေးလဲ ဗျာ " ပြည်သူတစ်ဦးရှေ့ အနည်းငယ်တိုးလိုက်သည် ။ " အဲဒီလို လေးဘက်လေးတန် မမှီမကမ်း အခြေနေမှာ ဘယ်လောက်ကြာကြာ ကားယားခုန်နေရ အုံးမလဲခင်ဗျာ "...
Posted by RammarKyaw at 00:16 No comments: Links to this post
အင်ဒိုနီးရှား ဆူမတ်တြားကမ်းလွန်မှာ အင်အားပြင်းငလျင်လှုပ်
ဒီကနေ့ အင်ဒိုနီးရှား အနောက်ဘက်ခြမ်း ဒေသစံတော်ချိန် မနက် ၁ နာရီ ၃၈ မိနစ် အချိန်မှာ ဆူမတ်တြားကျွန်းပေါ်က ဘန်ဒါအာချေးကမ်းခြေရဲ့ ပင်လယ်ပြင် မြောက်ဘက် ၂၅၄ မိုင်အကွာ ရေအောက် ၁၇ မိုင် အနက်ကို ဗဟိုပြုပြီးတော့ ပြင်းအား ၇.၃ မဂ္ဂနီကျုဒ် ရှိတဲ့ ငလျင်တစ်ခု လှုပ်ခတ်သွား ခဲ့တယ်လို့ အမေရိကန်ဘူမိဗေဒတိုင်းတာရေးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
အင်ဒိုနီးရှား မြေငလျင်တိုင်းထွာရေးဌာရဲ့ ပြင်းအား ၇ မဂ္ဂနီကျုဒ် ကျော်ရင် ဆူနာမီရေလှိုင်း သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်မှုရတဲ့ အစီအစဉ်အရ ဒီသတိပေးချက်ကို အစောပိုင်းမှာ ကြေညာခဲ့တာကြောင့် ဒေသခံတွေ ကုန်းမြင့်တွေပေါ် ထွက်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်။
အမေရိကန် ပစိဖိတ် ဆူနာမီစောင့်ကြည့်ရေးဌာနကတော့ အကြီးအကျယ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေ ဖြစ်နိုင်တဲ့ ဆူနာမီရေလှိုင်းတွေ တက်လာခြင်းမျိုး လုံးဝ မဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုကို အင်ဒိုနီးရှား အနောက်ပိုင်းနဲ့ မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာလည်း ခံစားခဲ့ကြရပါတယ်။
Posted by RammarKyaw at 20:17 No comments: Links to this post
လစ်လပ်နေတဲ့ လွတ်တော်နေရာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကော့မှူ မြို့နယ်ကဝင်ပြိုင်မည်
လစ်လပ်နေတဲ့ လွှတ်တော်နေရာတွေအတွက် ဧပြီလကျရင် ကျင်းပမယ့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ပါတီက ဝင်ပြိုင်ဖို့ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့် ရရှိပြီးတဲ့နောက်မှာ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲချုပ်ဟာ ပါတီကို အသစ်ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သဘာပတိအဖွဲ့နဲ့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင်တွေအဖြစ် ဦးဆောင်အဖွဲ့တွေရဲ့ အမည်စာရင်းကို NLD ပါတီက ဒီကနေ့ ထုတ်ပြန်လိုက်တာပြီး ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးနဲ့ အဖွဲ့ဝင်သစ်တွေ စည်းရုံးရေးတွေကိုလည်း နိုင်ငံတဝန်းမှာ လုပ်ဆောင်နေပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း ကော့မှူးမြို့နယ်က ဝင်ယှဉ်ပြိုင်မယ်လို့ NLD ပါတီက ပြောပါတယ်။ ဒီအကြောင်း အပြည့်အစုံကိုတော့ မသင်းသီရိက တင်ပြပေးထားပါတယ်။ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို အသစ်ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းရာမှာ သဘာပတိအဖွဲ့နဲ့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင်တွေအဖြစ် ဦးဆောင်အဖွဲ့ ၂ ဖွဲ့ရှိမှာဖြစ်ပြီး အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အမည်စာရင်းကို ဒီကနေ့ ဇန်န၀ါရီ ၁၀ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့မှာ NLD ပါတီက တရားဝင်ကြေညာချက်ထုန်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ သဘာပတိအဖွဲ့ဝင် ၅ ဦးနဲ့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် ၇ ဦးတို့ကို ပါတီရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းတွေနဲ့အညီ ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူထားတယ်လို့ NLD ပါတီရဲ့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်၊ ပြောခွင့်ရသူလည်းဖြစ်တဲ့ ဦးအုန်းကြိုင်ကပြောပါတယ်။ “သဘာပတိအဖွဲ့မှာက- ၁။ ဦးတင်ဦး (နာယက)၊ ၂။ ဦးဝင်းတင်၊ ၃။ ဦးသန်းထွန်း၊ ၄။ ဦးလှဖေ၊ ၅။ ဦးညွန့်ဝေ။ နောက် - ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့မှာက- ၁။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ဥက္ကဋ္ဌ)၊ ၂။ ဦးဉာဏ်ဝင်း၊ ၃။ ဦးဝင်းမြင့်၊ ၄။ ဦးအုန်းကြိုင်၊ ၅။ ဦးဟန်သာမြင့်၊ ၆။ ဦးထွန်းထွန်းဟိန်၊ ၇။ ဒေါက်တာမေဝင်းမြင့်- အဲလို ဖော်ပြထားပါတယ်။ နောင်တွင် သဘာပတိ အဖွဲ့နဲ့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ကို သင့်လျော်သလို ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။ အဲဒီလိုလည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။” နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် တရားဝင်ရပ်တည်ခွင့်ရထားပြီဖြစ်တဲ့ NLD ဟာ အခုလို ပါတီကို အသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလိုက်သလို တချိန်တည်းမှာပဲ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့ကျရင် ပြုလုပ်မယ့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်လည်း အောင်နိုင်ရေး ကော်မတီတွေနဲ့ နိုင်ငံတဝန်းမှာ စတင်လှုပ်ရှားနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ နို်င်ငံတဝန်း လစ်လပ်နေရာ ၄၈ နေရာစလုံးကို NLD ပါတီက ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မှာဖြစ်သလို ယှဉ်ပြိုင်မယ့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း စာရင်းကို ၁၁ ရက်နေ့မှာ နောက်ဆုံး တင်ကြရမှာဖြစ်ပြီး ဇန်နဝါရီ ၁၆ မတိုင်ခင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အမည်စာရင်းတွေကို ကြေညာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း လစ်လပ်နေတဲ့နေရာတွေထဲက ကော့မှူးမြို့နယ်ကနေ ယှဉ်ပြိုင်မယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။ “တခြားပြောင်းလဲစဉ်းစားထားတာ မရှိပါဘူး။ ကော့မှူးမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာပဲ ဝင်မယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းမှာဝင်ရင်လည်းပဲ ပြည်သူလူထု၊ လူမှုအဆင့်အတန်းနည်းနည်း ဆင်းရဲတော့ပေါ့ဗျာ- အားပေးထောက်ကူရာ လည်းရောက်အောင် ဝင်မယ်လို့ စဉ်းစားပြီးတော့ သူ ကော့မှူးမြို့နယ်ကို ရွေးချယ်ထားပါတယ်။ အခုထက်ထိ တခြားပြင်ဆင်တာမျိုး ကျနော်တို့ မကြားပါဘူးခင်ဗျ။ သွားပြီးတင်မှာကတော့ ၁၆ ပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် ဒီကာလအတွင်းမှာလည်းပဲ ဆုံးဖြတ်ပြီးတာနဲ့ ထုတ်ပြီးတော့ ပြောမှာပါ။” ဒါ့အပြင်ရန်ကုန် NLD ရုံးချုပ်နဲ့ တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေက NLD ရုံးတွေမှာ အဖွဲ့ဝင်သစ်တွေကိုလည်း စတင်လက်ခံနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း လစ်လပ်တဲ့တိုင်း သို့မဟုတ် ပြည်နယ်တွေမှာ ၂၀၁၀ ဇွန်လ ၁၄ ရက်နေ့စွဲနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ထုတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းနဲ့အညီ NLD ပါတီက စည်းရုံးမှုတွေလုပ်ဖို့ကိုလည်း NLD ပါတီဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့က ဒီကနေ့ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ အဲဒီစည်းကမ်းချက်တွေထဲမှာ အစိုးရပိုင်အဆောက်အအုံတွေ၊ သာသနာပိုင် အဆောက်အအုံတွေထဲမှာ ပါတီစည်းရုံးရေး ဆိုင်ရာ မလုပ်ဖို့တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်နေမှာ နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် ထူထောင်ခွင့် ကျခဲ့ပြီးနောက် ဇန်န၀ါရီလ ၅ ၇က်နေ့က တရားဝင်နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ကျခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by RammarKyaw at 20:03 No comments: Links to this post
ကချင်ပြည်နယ်၌ ရခိုင်အမျိုးသား ၃ဦးကို မြန်မာအစိုးရတပ်မှ ပစ်ခတ်
ကချင်ပြည်နယ် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကျားဘေးမဲ့တော ဟူးကောင်းချိုင့်ဝွမ်းဒေသ၏ ၁၉၉၄ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း အခြေအနေ။
ကချင်ပြည်နယ်အနောက်မြောက်ဘက် ဟူးကောင်းချိုင့်ဝှမ်းဒေသ၌ ရခိုင်အလုပ်သမား ၃ ဦးအား မြန်မာအစိုးရတပ်က ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဒဏ်ရာရရှိသည်ဟု ကချင်သတင်းဌာနက စုံးစမ်းသိရသည်။
ဇန်န၀ါရီလ ၃ ရက်ညနေ ၆ နာရီခန့်တွင် ၀ရာဇွပ်ကျေးရွာမှ ဂျာဝမ် (Ja Wang) ရွှေမှော်သို့ ထွက်ခွာလာကြသည့် ရခိုင်အမျိုးသား ၃ ဦးအား ရှထူးဇွပ်အခြေစိုက် ခလရ ၂၉၇ မှမြန်မာအစိုးရစစ်သားများက ယုဇကုမ္ပဏီ စိုက်ခင်း အနီးငယ်အကျော်တွင် ပစ်ခတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ၎င်းတို့နှင့်နီးစပ်သူများ ပြောသည်။မြန်မာအစိုးရတပ်က ၎င်းတုိ့အား KIA တပ်သားများနှင့် မှားယွင်းကာပစ်ခတ်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟု ဆက်ဆိုသည်။
သေနတ်ဒဏ်ရာရထားသည့် ရခိုင်အမျိုးသားများအား အနီးရှိ အစိုးရဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ထားသည် ဟု သိရသည်။ကျားဘေးမဲ့ ဟူးကောင်းချိုင့်ဝှမ်းတွင် စစ်သလင်းဖြစ်လာ
ဟူးကောင်းချိုင့်ဝှမ်းဒေသသည် ကျား၊ ကျားသစ်၊ ဆင်၊ ဟိမ၀န္တာဝက်ဝံ စသည့် ရှားပါး တိရစ္ဆာန်များ ခိုအောင်းနေထိုင်ရာ ဒေသဖြစ်သည်။
၁၇ ကြာအပစ်ခတ်ရပ်ဆိုင်းထားမှု ပျက်ကာ ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လ တိုက်ပွဲစတင်လာချိန် ၎င်းချိုင့်ဝှမ်းဒေသမှ တိုက်ပွဲသတင်းများ ဆက်တိုက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။
၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့် WCS (Wildlife Conservation Society) တို့ဟူးကောင်းချိုင့်ဝှမ်းဒေသကို ကျားထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေအဖြစ် နှစ်ဦးသဘောတူ သတ်မှတ်ခဲ့ရာ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ၂၁၈၉၀ စတုရန်း ကီလိုမီတာအထိ နယ်မြေသတ်မှတ်လိုက်ရာ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကျားထိန်းသ်ိမ်းရေး ဘေးမဲ့သစ်တော ဒေသဖြစ်လာသည်။
သို့သော် ၂၀၀၄ ခုနှစ်ကတည်းက သီးနှံတစ်မျိုးတည်းစိုက်ပျိုးနေခြင်းနှင့် ရွှေကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့်တူးဖော်နေခြင်းတို့ကြောင့်် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးယိုယွင်းနေခြင်းအပေါ် မြန်မာအစိုးရအား ဝေဖန်နေကြသည်။
ယခင် WCS ညွှန်ကြားရေးမှူး Dr. Alan Rabinowitz ကလည်း ဟူးကောင်းချိုင့်ဝှမ်းနှင့်ပက်သက်၍ မှန်ကန်သော အစီရင်ခံစာများ ထုတ်ပြန်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သည်ဟု ကချင်လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကွန်ယက် KDNG က ထောက်ပြထားသည်။
ယခင်နှစ် စက်တင်ဘာလတွင် မြန်မာအစိုးရ၏ သစ်တောဝန်ကြီးဌာနနှင့် WCS တို့သည် ဟူးကောင်းချိုင့်ဝှမ်းစီမံကိန်းကို နောက်ထပ် ၄ နှစ် သက်တမ်းထပ်မံ တိုးမြှင့်လိုက်စဉ် ၎င်းအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂ သန်း ကုန်ကျရန်ရှိသည်ဟု တရုတ်အစိုးရသတင်းစာ ရှင်ဟွာက ဖော်ပြထားသည်။
Posted by RammarKyaw at 08:56 No comments: Links to this post
ဆေးလိပ်အရက်မိန်းမ ကင်းရှင်းသောသူအလိုရှိသည်ဟု အပျိုကြီးတစ်ယောက် သတင်းစာထည့်တွင် ကြေညာထည့်သည်။ တစ်ကိုယ်လုံးအရက်နံ့ထွက်နေပြီး လက်ထည့်တွင်စီးကရက် ကိုင်ထားသော လူတစ်ယောက်ရောက်လာသည်။ အပျိုကြီးကမေးသည်...ဘာကိစ္စလဲ".."သတင်းစာထည့်မှာကြော်ညာထားတဲ့ ကိစ္စ" "သြော် ရှင်အရက်မသောက် တတ်ဘူးလား ".."မိုးလင်းမိုးချုပ် တနေကုန်သောက်တယ်".."ဆေးလိပ်တော့မသောက်ဘူးလား".."ဘယ်ကသာသောက်တာမှ မီးခိုးခေါင်တိုင်လိုပဲ တစ်နေ့ ၅ဗူးလောက်ကုန်တယ်".."ဒါဖြင့်မိန်မတော့ ကင်းရှင်းတယ်ဟုတ်"...အပျိုကြီးကလည်းနောက်ဆုံး မေးခွန်းကို မျှော်လင့်တကြီးနဲ့ပေါ့.."ပျိုပျို အိုအို လာထားပဲ"..."ဟွမ်း..ဒါဆို ရှင်ဘာလာလုပ်တာလဲ "..."ခင်ဗျားကျုပ်ကို ထယ်တော့မှမမျှော်လင့်နဲ့ လို့လာပြောတာ".....
Posted by RammarKyaw at 00:14 No comments: Links to this post
စည်းလုံးခြင်းရဲ့အင်အားဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှ မိခင်ဘလောဒ်(photayokeking.blogspot.com)ဖြစ်ခဲ့စဉ်ကသတင်းများ ကိုဖေါ်ပြခြင်းမပြုခဲ့ဘဲ ဆောင်းပါးများကိုသာ တင်ပြခဲ့ရာ စာဖတ်သူများ ရေပန်းစား၊ အထူးကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့ပြီး ဆောင်းပါးအနေဖြင့် ဇာခန်းဆီးနောက်ကွယ်မှ ဇာတ်လမ်းများကို အပိုင်းလိုက်တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ဘက်နီးစပ်သူများကတပ်မတော်အတွင်း အတွင်းကြိတ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ သတင်းများကို ထပ်မံပေးပို့လာလို့ တင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
တပ်မတော်ထောက်လှမ်းရေးဟောင်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းခင်ညွန့်ဟာ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းအိမ်တွင်နေခဲ့စဉ်ကထောက်လှမ်းရေးတပ်မှပြုတ်သွားသူများ၊ အကျဉ်းထောင်မှပြန်လွှတ်သူများကိုအမှတ်တရညစာစားပွဲသဏ္ဍန်ဖန်တီးပြီး တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့သတင်းအား ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေတို့က ရရှိသွားခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆိုင်းမပါ ဗုံမဆင့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်အိမ်အား မီးဖြတ်ပြီး ညအချိန်မတော် ရဲချုပ်နဲ့ အကျဉ်းဦးစီးဌာန ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်တို့အဖွဲ့ကိုသွားရောက်ဖမ်းဆီးခိုင်းကာပိုမိုတင်းကြပ်တဲ့အကျဉ်းထောင်အတွင်းသို့ ခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွန့်က သူ့ခေါင်းပေါ်ရှိ ဆံပင်ကို လက်ညှိုးထိုးကာ အပြင်သို့ မသွားဘဲ သူကိုယ်တိုင် ဆံပင်ညှပ်ရကြောင်း မလုံမလဲ ပြောဆိုတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး သူ့ရဲ့သားအား ခဏဆိုပြီး ဖမ်းချုပ်ခေါ်သွားခဲ့စဉ်က အထုပ်အပိုး ပစ္စည်းတွေတောင်မှ ယူခွင့်မပြုတာကို ဝမ်းနည်းပက်လက် ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီဖြစ်စဉ်များအရသံဝေဂတရားရယူနိုင်ရေးအတွက်လက်ရှိဗိုလ်ချုပ်များအားတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။
Posted by RammarKyaw at 23:52 No comments: Links to this post
kyauphyu, Rakhine, Myanmar (Burma)
ပေါင်းတည်မြို့ ကိုမင်းကိုနိုင် ၏မေးခွန်း ဟောပြောပွဲ
Daily Amimal Plant..TV
Rammar Kyaw's Animal Plant..TV
ကိုးရီးယား ဂစ်တာ ပညာရှင် ကလေးများ
ရွှေဆိုတာ ဘာလည်း. Picture Window theme. Powered by Blogger.